Daawo Muuqaal: Itoobiya oo u yeedhay Gudoomiyeyaasha Gobolada S.land iyo Warar kala duwan oo kasoo baxay!! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO Daawo Muuqaal: Itoobiya oo u yeedhay Gudoomiyeyaasha Gobolada S.land iyo Warar kala duwan oo kasoo baxay!!
Daawo Muuqaal: Itoobiya oo u yeedhay Gudoomiyeyaasha Gobolada S.land iyo Warar kala duwan oo kasoo baxay!!
Feb 22, 2017MAQAALO, MUUQAAL
“Eygaada gaajeysii haku raaceen” Itoobiya oo farta ugu yeeratay Eyaheeda ee Gaajaysiisay kuwaas oo lagu gaajaysiiyay Ictiraaf beenta ee uraadinaayaan Itoobiya “hadii Hargeesa loo aqoonsado Jigjigana Dowlad maxaa udiidaayo? Itoobiya walaahi Soomaaliland ma urabto in la aqoonsado lakiin sida aygii meesh ee rabto inay udirsato lee Hadase waxaa Amrkii Cabdimaalik lagu xeray Itoobiyaa lahayd iyagoo dalbaday in lasiiyo .,
Dawlada Itoobiya ayaa u yeedhay Xubnaha maamulka Somaliland ugu magacaaban Badhaasabada Gobolada, sidoo kalana waxaa safarka ku wehelinaya Saraakiil iyo Wasiiro ka tirsan maamulka Somaliland, Waxayna tagi doonaan magaalada Jig-jiga.
Wararka ayaa Sheegaya In Itoobiya Dalbatay Soo Wareejinta Labo Nin oo lagu sheegay in Itoobiya ka rabto Somaliland balse xabsiga imika ku jira, kuwaasi oo kala ah Cabdmaalik Coldoon Iyo Abwaan C.waaxid Gamadiid, waxaana la sheegayaa in laamaha amniga Itoobiya ka codsadeen in Lasoo gacangaliyo taasi oo lasheegay in Somaliland ka dhago adaygtay,Warkani oo ku warameen rag ka tirsan laamaha amaanka Somaliland ayaa sheegay in wali wadahadal lagulojiro Jigjiga.
MUUQAALKA HALKAAN HOOSE KA DAAWO
Previous PostWar Deg Deg ah: R/Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya oo ka hadlay xilka loo magacaabay (Daawo Muuqaal) Next PostArday dugsiilay ah oo fursad mar la’arag ah heshay “Sawirro” Maclimiin Quraan dhiga oo ku dhiiraday arin farxadeed!!